Internet-ka oo weli looga maadaysanayo xiddigii Buurnaa ee Itoobiya u soo dirsatay Tartanka Dabaasha Olombikada 2016 + Sawirro – Gool FM
Internet-ka oo weli looga maadaysanayo xiddigii Buurnaa ee Itoobiya u soo dirsatay Tartanka Dabaasha Olombikada 2016 + Sawirro
(Rio de Janeiro) 11 Agoosto 2016 – Weli dadka isticmaala aaladda Internet-ka ayaa ku maadsanaya ciyaayahankii Buurnaa ee ay Dowladda Itoobiya u soo dirsatay inuu uga qayb galo tartanka Dabaasha Cayaaraha Olombikada ee ka soconaya Rio de Janeiro, Brazil.
Robel Kiros Habte ayaa ka qayb galay tartankii Dabaasha 100m Freestyle, balse waxa uu galay kaalinta ugu dambeysay 59′ Dabaalyahan ee la tartansiiyay, waxaana kaalinta 1′ galay Kyle Chalmers oo ku dhameeyay 47.9 Ilbiriqsi, balse Habte waxa uu ku dhameeyay 1 daqiiqo iyo 4.95 ilbriqsi oo macneheedu yahay inuu 17 ilbriqsi ka dambeeyay xiddiga galay kaalinta 1-aad.
Dadka Internet-ka ku kaftama ayaa waxay u bixiyeen Dabaalyahanka Itoobiyaanka ah ‘Habte The Whale’ – Habte Nibirigii, iyagoo ula jeeda jirkiisa naaxsan ee aan u qaab ekayn Ciyaartooy.
Mar la wareystay Habte, wuxuu sheegay in dalkiisu caan ku yahay Orodada, balse tani sababtii uu u doortay ay tahay inuu bilaabo tartan cusub oo ka duwan orodka ay Itoobiya caanka ku tahay.
Dabaalyahankan ayaa dadka soo xasuusiyay ciyaartooy kale oo u dhashay Equatorial Guinea oo lagu magacaabo Moussambani, kaasoo ku fashilmay Cayaarihii Dabaasha sanadkii 2000′ markii uu si dirqi ah ku dhameeyay 100m Freestyle isagoo la yimid rikoor u muuqday mid aan loogu talo galin cayaaraha nuuciisa ah 1 daqiiqo iyo 52 Ilbiriqsi.
"Rooney iyo Zlatan wuu isku dagaali karaan Manchester United'.
Xulka Brazil oo gaaray siddeed dhammaadka markii ay xaaqeen Denmark... (Muuqaal + Sawirro)